Khiyaamadahan waxaad ku horumarin doontaa maqalka Samsung Galaxy-gaaga oo leh One UI | Androidsis
Khiyaamada ugufiican ee lagu hagaajiyo codka Samsung Galaxy-gaaga oo leh One UI
ka Samsung Galaxy waxay la socotaa lakabka gaarka ah ee UI taasina waxay noo ogolaaneysaa inaan horumarino maqalka taleefankeena. Xaaladdan oo kale waxaan u isticmaali doonnaa Galaxy S10 + waxayna ku siinaysaa waayo-aragnimo maqal weyn runtii. Waxaan ku baraynaa tabaha ugu fiican si dhibicdaas dheer looga saaro codka.
Tabaha sida loo isticmaalo laba maqal ee loogu talagalay ku xir laba qalab Bluetooth oo markaa soo saarida maqalku waa isku mid (waa qaas in la isku xiro laba sameecadood) ama waddo lagu kordhiyo xadka codka marka aan dhageysaneyno muusikada aan ugu jecel nahay headphones-keena.
1 Kordhi mugga codka adoo adeegsanaya sameecadaha dhagaha
2 Firfircoon Dolby Atmos
3 Qalabka La Qabsada
5 Badhamada mugga si loo xakameeyo warbaahinta
6 Kaaliyaha codka
7 Kordhi tallaabooyinka mugga
8 Bluetooth 5 oo loogu talagalay laba maqal
9 Koodh khaas ah
Kordhi mugga codka adoo adeegsanaya sameecadaha dhagaha
Si loo isticmaalo shaqadan Waa inaanu leenahay habka horumariyaha firfircoon:
Waxaan aadeynaa Settings> Wixii ku saabsan taleefanka> Software-ka waxaanna gujineynaa toddobo jeer lambarka isku-darka illaa habka soo-saare ee aan soo sheegnay la hawl-gelinayo.
Markaan firfircoonaanno, waxaan aadeynaa habka soo-saaraha oo aan raadineynaa ikhtiyaarka loo yaqaan 'Disable mugga buuxda'. Waan ka shaqeyneynaa oo waxaan baabi'ineynaa xadka laga yaabo inay jiraan marka aan badino codka ka soo baxa ku hadlayaashayada ama sameecadaha dhagaha.
Firfircoon Dolby Atmos
Haddii aad ku jirto taleefankaaga Samsung Galaxy waxaad haysataa ikhtiyaarka codka Dolby Atmos, waxay ku dhowdahay waajibaad in markasta laga dhigo mid firfircoon. Waxay noo ogolaaneysaa inaan ku raaxeysano hagaajinta tayada maqalka, marka laga reebo xaqiiqda ah in barnaamijyadan, ciyaaraha fiidiyowga ama fiidiyowyada keena qaabka codka ay ku raaxeysan doonaan saameyn dhab ah oo baaxad leh.
Waad ka dhaqaajin kartaa guddiga gelitaanka degdegga ah adoo wata astaan ​​u leh. Xusuusnow inay kuxirantahay qaabka muusiggaWay fiicnaan kartaa ama kaaga xumaan kartaa inaad kiciso; Halkan waxaan ku tusaynaa qaar ka mid ah tabaha loogu talagalay Galaxy Buds.
Qalabka La Qabsada
Habboon Sound waa muuqaal adiga kuu ah la jaanqaado maqalka maqalka iyo awooda maqalka. Haddii aan u tagno goobaha dhawaaqa waxaan ka heli doonnaa ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo lagu kicin karo Adapt Sound.
Xilliga aan dhaqaajino waxaan arki doonaa xulashooyin kala duwan. Xaqiiqdi waxay kugula yaabi doontaa inaad kala dooran karto da 'kala duwan tanina waa sababta oo ah markaan yarayn karno awoodeena maqalku waa hagaagsan yihiin waxayna lumiyaan sidaan da' nahay. Xulo mid gaar ah sanadahaaga.
Hal UI oo ku jira Samsung Galaxy wuxuu leeyahay wax ka badan shaqooyinka xiisaha leh sida barbaraha codka. Midkani waa mid fudud, tan iyo iyadoo loo eegayo qaabkaaga muusigga Waxyaabaha ugu xiisaha badan ayaa seddexleey, dhexe iyo baas ku dhigi doona barbaraha. Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay inaad isticmaasho mid caado ah haddii aad jeceshahay inaad taabato xuduudahaas si aad u hesho cod ku habboon dhadhankaaga inbadan.
Badhamada mugga si loo xakameeyo warbaahinta
Badal ahaan badhamada mugga ee Galaxy waxay xakameysaa mugga wicitaanka. Taasi waa, haddii aad mid riixdo, mugga codka laxanku wuu kordhayaa markay ku soo wacaan. Waxaan leenahay ikhtiyaar u leh in lagu hagaajiyo badhannada mugga si loogu isticmaalo iyaga oo leh xakamaynta multimedia si aan kor ugu qaadi karno una yareyn karno mugga muusikada aan jecel nahay ee leh 'Spotify'.
Waxaan gujineynaa furaha mugga.
Bar muggu wuu muuqdaa.
Waxaan hoos ugu tilmaameynaa dhammaan xuduudaha ayaa soo muuqan doona. Waxaan eegeynaa midka ugu dambeeya si loo kiciyo kontaroolada multimedia.
Barnaamijkaan waa waa in lagu dhejiyaa Samsung Galaxy-gaaga leh hal UI, maxaa yeelay waxay kuu oggolaaneysaa inaad kontaroolo aad u horumarsan ka heshid codka. Ma wada qori doonno dhammaantood, laakiin waxaad si aad ah ugu baran kartaa qoraalkan.
Kordhi tallaabooyinka mugga
Kaaliyaha Dhageysiga ama Kaaliyaha Codka waxaan si habboon ugu habeyn karnaa tallaabooyinka laga soo qaado marka aan riixno mid ka mid ah furayaasha mugga. Haddii aan u dhigno 1, taasi waa, ugu yar, waxaan u baahan doonaa 150 talaabo si aan u gaarno mugga ugu sareeya. Haddii aan u dhigno labo barnaamijka, badh iyo wixii la mid ah.
Hab gaar ah oo ka mid ah awood u yeelatid inaad hoos u dhigto mugga ugu yar si aysan u carqaladeyn oo u sii wadin dhageysiga ciyaartaas fiidiyowga ah ama muusigga ka yimid ciyaaryahan.
Bluetooth 5 oo loogu talagalay laba maqal
Dual Audio waa ikhtiyaar loogu talagalay dhaqaajiso laba qalab Bluetooth iyo in lagu shaqeysiiyo waqti isku mid ah isla isha codka. Waxaan xirnaa muusigga aan jecel nahay, waxaan dhaqaajineynaa labada dhagaha, mid waxaan u dhaafeynaa saaxiibkey, kan kalena nafsadeena ayaan u dhegeysaneynaa isla markaana dhageysaneynaa muusikada isla waqtigaas. Hab gaar ah oo loo wadaago muusikada, sida loogu isticmaali karo ujeedooyin kale.
Aan aadno Xiriirinta> Bluetooth> Firfircoonida Bluetooth> Badhanka midig ee bidix ee loogu talagalay Advanced> Firfircoon Dual Audio.
Koodh khaas ah
Sameecad kastaa waxay leedahay koodh u gaar ah, gaar ahaan haddii uu ka yimid nooc caan ah sida Sony. Haddii aan xoogaa ka helno Sony waxaan aadi karnaa goobaha horumarinta oo aan raadsan karnaa koodhadhyo khaas ah. Waxaan ka dooranaynaa midka ay soo-saaruhu kugula taliyay buugga tilmaanta ama buugga waana intaas. Waan maarayn doonnaa si aan u hagaajino codka sameecadaha dhagaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Khiyaamada ugufiican ee lagu hagaajiyo codka Samsung Galaxy-gaaga oo leh One UI
Maamuus Band 5: jijimmo waxqabad cusub oo summaddu leedahay
Dhinac ficil-buuxiye ah ayaa la socda 'Walaalaha Bombastic